Lọ Ọrụ Uwe | China Gown Manufacturers, Suppliers
Green ịwa ahụ gown akwa urology ịwa ahụ gown dị ọcha owu ịwa ahụ gown
Disposable ịwa ahụ gown na ịwa ahụ gown reusable si 100% owu na atụmatụ a mechiri emechi azụ na a eriri eriri. Uwa ịwa ahụ nwere ike ịsacha ma enwere ike ịme ọgwụ. Uwe ndị a na-eji akwa akwa na-adịgide adịgide na anụ ahụ ọbụna n'oge eji ogologo oge. Uwe a na-acha ogologo aka ịwa ahụ dị na nha dị iche iche, yana na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Wa ahụ disposable gown larịị 4 ịwa ahụ gown iche iche gowns reusable gowns ịwa ahụ
Ọkwa 4 ịwa ahụ uwe mwụda iche na ịcha akwa nwere ike ịkwa akwa akwa na-enweghị ike ịwụnye n'okpuru uwe aka, na ịkwanye akwa na-enye ezigbo ike ma enweghị akwụkwọ. Ekpo na-egosi, na-eku ume, na-anọte aka ma na-akpa ike dị iche. Static Free-No Clinging Iso uwe dị fechaa, breathable na ala. Ha na-ekpuchi ahụ na uwe gị ma mepụta ihe mgbochi anụ ahụ na mbufe nke ụmụ nje na ihe ndị ọzọ. Ties na olu na ukwu.
Disposable ọgwụ gowns sterile disposable gown gown larịị-3 ịwa ahụ gown
A na-eji ejiji na-eme ka a na-ahụ maka ịwa ahụ na-awa ahụ na nke ịwa ahụ. Kwesịrị ekwesị maka iji n'ụlọ ọgwụ, ụlọ nyocha, ụlọ ọgwụ na ngwa ngwa ọhụụ. Kemeghi nko na akaghị neckline mmechi. Ikpa efe.
Medical ịwa ahụ gown SMS ịwa ahụ gowns medical nonwoven ákwà ndidi gowns medical apron
Patientlọ ọgwụ ndidi gowns ịwa ahụ na-mere nke elu àgwà yiri ogwe na-abụghị kpara ọmụmụ na-eguzogide ọgwụ, ya breathable, fechaa ákwà na-egbochi na-ekpo ọkụ okpomọkụ buildup ..
Reusable ọgwụ na-abụghị kpara gown waterproof ịwa ahụ gowns
Urgicalwa ahụ Mwepu Gowns nke na-enweghị isi na nke na-enweghị mmiri na-enweghị mmiri na-eme ka ọ dị mma, na-enye nchebe akụ na ụba, nke ọma na ntụkwasị obi. Uwe Mwepu Onwepu Ocha ndi a di nma maka ndi dibia, ulo ogwu, ulo ogwu na ihe omuma.